क्राग फेडरिघी स्विफ्ट खोल्ने कुरा गर्छन् आईफोन समाचार
क्र्याग फेडरिघी स्विफ्ट खोल्ने कुरा गर्दछ
December डिसेम्बरमा, एप्पलले आफ्नो वचनमा राम्रो बनायो र बनायो तेज, यसको प्रोग्रामिंग भाषा, खुला स्रोत। छोटो समय पछि, एप्पलका सफ्टवेयरका उपाध्यक्ष, क्रेग फेडरिही उनीहरू किन आफ्नो भाषा खुला स्रोत बनाउन चाहन्थे र किन भविष्यको लागि प्रतिक्षा गर्दै थिए भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्दै केही अन्तर्वार्ता दिएका थिए, भविष्य, यदि तपाई प्रविधिको समाचार पढ्नुभयो भने, विशेष गरी इन्टरनेटमा, तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि यो एकदम, धेरै आशाजनक छ ।
फेडरिगीले कुरा गरेको पहिलो कुरा चीजहरू जुन एप्पलले पहिलो हप्तामा पत्ता लगाई स्विफ्टबाट आएको हो खुला स्रोत, र त्यो स्विफ्ट हो GitHub मा सबै भन्दा सक्रिय भाषा। यस गतिविधिको लागि धन्यवाद, स्विफ्ट टोली विकासकर्ताहरूसँग कपर्टिनो कम्पनीका कुनै पनि अन्य टोलीसँग बढी जोडिएको छ र अर्कोतर्फ, नयाँ भाषा प्रयोग गर्दा तिनीहरू धेरै उत्साहित छन्। जे भए पनि उद्देश्यका साथ एप्पलका सफ्टवेयरका उपाध्यक्ष नयाँ रिलीजको बारेमा के भन्दै छन्? यद्यपि यो सायद सत्य हो, मैले अन्यथा भन्नु हुँदैन।
आईक्लाउड टोलीले विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा स्विफ्ट प्रयोग गरिसकेको छ र ओएस एक्स टोलीले प्लेटफर्मको पक्षहरूलाई नयाँ प्रोग्रामि programming भाषामा रूपान्तरण गर्न पनि काम गरिरहेको छ। विशेष रूपमा, ओएस एक्सको डक र विन्डो प्रबन्धक। टोलीले व्यावहारिक के हो र के होईन पहिचान गर्दछ, तर तिनीहरू सधै स्विफ्ट प्रयोग गर्न उपायहरू फेला पार्दछन् जब सक्दछन्। सबै कुराको रूपमा, अनुकूलन र अनुभव हामीलाई थाहा छ वा नयाँ के हो प्रयोग गर्न निर्णायक छ।
भाषाको खुलापनका लागि, फेडरिघीले भनेका सबै भन्दा राम्रो कुरा यो छ कि अब यो विश्वभरका स्कूलहरूमा सिकाउन सकिन्छ। टिम कुकको मान्यता छ कि अमेरिकाको प्रत्येक सार्वजनिक स्कूलमा प्रोग्रामिंग सिकाउनु पर्छ र स्विफ्ट खुला स्रोतले यस सम्भावनालाई अनुमति दिन्छ। कपर्टिनोमा उनीहरू विश्वास गर्छन् स्विफ्ट हुनेछ अर्को २० बर्षको लागि प्राथमिक भाषा.
फेडरिघीले यो पनि मान्यता दिन्छ कि स्विफ्ट खुला स्रोतले उनीहरूलाई धेरै फाइदा गर्दैन तर, अर्कोतर्फ, यो हो विकासकर्ताहरूको लागि राम्रो कुनै पनि प्लेटफर्मको, यद्यपि उहाँ सचेत हुनुहुन्छ कि यी विकासकर्ताहरूको धेरै काम कुनै पनि एप्पल उत्पादनसँग सम्बन्धित हुँदैन। यस अर्थमा यो भन्न सकिन्छ कि खुला स्रोत भाषा गर्नु एक परोपकारी इशारा हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » क्र्याग फेडरिघी स्विफ्ट खोल्ने कुरा गर्दछ
प्रोक्रिएट जेब थ्रीडी टचको साथ उपयुक्त हुन्छ
आउटलुक3डी टच को लागी समर्थन प्राप्त गर्दछ